Duufaanta kulaylaha: astaamaha, qaab dhismeedka iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 10/06/2021 10:00 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Dhulkeena waxaa jira noocyo badan oo roob ah oo kuxiran qaabka, asalka iyo cawaaqibta. Mid ka mid ah ayaa ah duufaan kulaylaha. Waxaa loo yaqaanaa duufaan kuleyl ah nidaamka saadaasha hawada oo leh cadaadis hooseeya oo ay dabeyluhu ku wareegayaan udub dhexaad waxayna ku jiraan wareegga xiran. Tani waxay ka dhigeysaa inay noqon karto mid waxyeello leh haddii ay jiraan waqti dheer.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato duufaanta kulaylaha, astaamaheeda, asal ahaan iyo cawaaqibkeeda.
2 Noocyada duufaanka kulaylaha
3 Ka dib duufaan kuleyl ah
4 Niyad jabka kulaylaha, duufaannada iyo magacyada
Markaan kahadalno duufaanta kuleylaha, waxaan tixraaceynaa nidaamka saadaasha hawada halkaasoo cadaadiska hooseeya uu ku badan yahay. Dabaylaha waa kuwo aad u kacsan waxayna ku dul wareegaan udub dhexaad wareeg wareeg ah. Sidaas darteed, Duufaantan oo dhan waxay ka helaan tamartooda uumiga hawo qoyan oo ku jirta diirimaad diiran. Asalka duufaanadan waa kuwo diirran oo dhaliya cadaadis hoose maadaama hawo kulul ay u janjeedho inay kacdo oo ay u dhaafto meel qaybta dhexe ee jawiga ah. Hoos u dhaca cadaadisku wuxuu keenayaa inta harsan ee hareeraha ku jirta inay "buuxiyaan" booska ay ka tagtay hawada kulul.
Waxaas oo dhami waxay sababaan dhaqdhaqaaq hawadeedka hawada oo dhaliya duufaanka kulaylaha. Duufaanta waxay heshaa tamarta uumiga hawada qoyan waxaana badanaa lagu gartaa roobab mahiigaan ah iyo dabaylo xoog leh. Adkeynta iyo heerka burburka dabayshan ayaa ku kala duwan hadba heerka tamarta ay leeyihiin. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo ku xiran hadba sida ay u xoogan tahay, diiqadaha kuleylaha ayaa laga soocayaa duufaanta kuleylaha iyo duufaannada Qaar ka mid ah duufaanta kulaylaha badanaa aad u ballaadhan oo laga daawan karo jawiga sare ee meeraha. Taasi waa, cirbixiyeennadu waxay ka arki karaan xoogaa duufaanno kulaylaha dayax gacmeed.
Noocyada duufaanka kulaylaha
Labadaba duufaanta kuleylaha waa nooc ka mid ah duufaanada kuleylaha, waxaa jira dhowr nooc oo cayiman oo duufaanno dhaca, sida magacooda ka muuqata, meelaha kuleylaha. Duufaannada iyo duufaannada waxay ku dhacaan qaybtaan. Aan aragno maxay yihiin noocyada kala duwan ee duufaanka kulaylaha ee jira:
Duufaanno siyaado ah: waxay ku sameysmaan latitude ka sareeya 30 darajo laba ama kabadan hawo hawo badan. Cufnaantaasi waxay leeyihiin heerkullo kala duwan.
Duufaannada Polar: waxay haystaan ​​nolol gaaban oo waxay ku kacaan gobollada cirifka.
Duufaannada kuleylka ah: waxay leeyihiin astaamo dhexdhexaad ah oo u dhexeeya labadii qaybood ee hore.
Sida loo sameeyay, duufaan kuleyl ah waxay dhacdaa waqtiga tayada sanadka, maadaama ay u baahan tahay qadar badan oo shucaaca qoraxda ah. Badanaa waxaa laga soo saaraa badda markii duufaan yar ay tamar ka hesho uumiga biyaha diirran ee dusha sare ee badda. Caadi ahaan waxay badanaa dhacdaa xilliyada ay jiraan heer-kul sare ama shucaaca qoraxda oo aad u badan. Waxaas oo dhami waxay abuuraan waji biyo diirran oo qoyan oo kor u kaca oo wajaha hawo qabow hore wuxuu sababa labadaba inay ku wareegaan dhidibka guud. Saciid wuxuu ku yaal bartamaha aagga waxaana lagu yaqaan magaca isha duufaanka.
Wareegga ayaa soo noqnoqonaya marka duufaanku helo tamar iyo dhaqaaq. Sidan oo kale, aagagga roobka iyo dabaylo xoog leh ayaa la soo saaraa. Duufaanta kulaylaha waxay ku xoogeystaan ​​biyaha diiran waxayna ku lumiyaan xoog dhulka. Duufaan kuleyl ah waa dhacdo dabiici ah oo saadaasha hawada ah oo dhacda marka laba waji oo qoyan ay kulmaan xaalado aad u qaas ah: dabayl diiran iyo dabayl qabow ayaa midba midka kale riixayaa.
Dhinaca kale, markay soo galaan qaaradda, waxay u muuqdaan inay lumiyaan xoog iyo kala firdhaan sababtoo ah hakadka ku yimid wareegga dabaylaha kulul iyo kuwa qabow.
Ka dib duufaan kuleyl ah
Duufaanta kulaylaha waxay awood u leeyihiin inay soo afjaraan nolosha dad badan. Xitaa haddii aysan noqon duufaanno, duufaanta kulaylaha waxay waxyeello weyn u geysan kartaa dadka. Saameyntooda ayaa si gaar ah uga muuqata aagagga xeebta, maadaama ay qaadi karaan dabeylo xoog leh, rogi karaan walxaha, kicin karaan hirarka xeebta ama soo saari karaan roobab culus oo sababi kara daadad.
Waxaas oo dhami waxay galaafan karaan nafo badan. Haddii dadku aysan u diyaar garoobin oo ay u feejignaadaan xaaladaha cimiladaas aadka u daran, qasaarooyinka maadiga ah badanaa waa kuwo daran oo ka soo kabashada meelaha ay dhibaatadu saameysey waxay qaadan kartaa waqti dheer. Muran, duufaannadu sidoo kale waxay saameyn togan ku leeyihiin cimilada adduunka: biyaha roobka u gee gobolada oomanaha ama semi-oomane. Sidaa darteed, waxay si aan toos ahayn u dhiirrigeliyaan qoyaan ahaanta dhulalka haddii kale ku dhaca carar, sida koonfurta Mareykanka ama Jabbaan.
Duufaantii ugu weyneyd adduunka ayaa dhacday dabayaaqadii xagaaga, markii baddu kululaatay. In kasta oo gobol kastaa soo bandhigi karo xaaladiisa duufaano iyo xilliyadiisa, haddana waxaa la arkay in marka la eego duufaannada, Maajo badiyaa ay tahay bisha ugu yar ee firfircoon, halka September ay tahay bisha ugu shaqada badan. Tani waxay sabab u tahay ifafaalaha la qabsashada. Si biyaha baddu u kululaadaan, waa inay ku dhowaad xagaaga oo dhan qaataan. Sidan oo kale, baddu way diirnaan doontaa inta lagu jiro bisha Sebtember waxayna keeni doontaa xaaladaha ugu habboon jiilka duufaanka kulaylaha.
Niyad jabka kulaylaha, duufaannada iyo magacyada
Duufaannada kuleylaha waxaa loo magacaabay si ay u awoodaan inay ku aqoonsadaan inta ay ku jiraan safarkooda, tan darteed magacyada dadka, haweenka iyo ragga ayaa loo isticmaalaa. Waxaa lagu xushay xarfaha xarfaha ugu horreeya waxayna ku socdeen siday u kala horreeyeen xilligii duufaanka. Sidaa darteed, isagumidka hore waxaa lagu magacaabaa A, kan labaadna B, iyo wixii la mid ah.
Niyad jabka kulaylaha wuxuu isu rogaa dabeylo iyadoo la helayo tamar. Niyad jabka kulaylaha waa nooca ugu liita ee duufaanada kulaylaha ee jira. Dabaylkeedu wuxuu leeyahay wareejin xiran ilaa 17 mitir ilbiriqsi kasta, in kastoo duufaanku gaari karaan xawaare sare. Haddii cadaadisyo hooseeya (oo loogu yeero sababta oo ah waa qaaciddada cadaadiska hoose) ay ku helaan tamar dhaqdhaqaaq, way sii wadi doonaan inay koraan illaa ay ka noqdaan duufaanno kuleyl leh oo ay ku socdaan xawaare dabeyl u dhexeeya 17 iyo 33 mitir ilbiriqsigii.
Duufaannada ayaa ah kuwa ugu daran ee ku dhaca duufaanta kuleylaha. Waxay ka soo bilowdaan duufaanada kuleylaha waxayna helaan tamar illaa iyo inta xawaaraha dabayshu u dhigmayo ama ka sarreyso 34 mitir ilbiriqsi kasta. Marka loo eego cabirka Saffir-Simpson, duufaannada waxaa loo kala qaadaa 3, 4 ama 5 heer oo ku xiran xoogga dabeylahaas.
Duufaannadu waa xilliyo waxayna ka dhacaan bariga, sida xeebta Hong Kong. Magacan waxaa loo isticmaali karaa in lagu magacaabo niyadjabka, duufaanka iyo duufaanada kuleylaha, maxaa yeelay ereyga waxaa loola jeedaa xilliyada dhacdooyinka saadaasha hawada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto duufaanka kuleylaha iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaanta kulaylaha